Faahfaahin: Agaasimihii Radio Muqdisho oo qarax lagu dilay iyo agaasimihii telefishinka oo isna dhaawac ah – Radio Daljir
Nofeembar 20, 2021 6:20 g 0
Weerarkaasi qarax oo ka dhacay inta u dhaxaysa Jubba Hotel iyo Daljirka dahsoon, waxaa ku geeriyooday agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guleed Afrika, waxaana ku dhaawacmay agaasimahii telefishinka dawladda Sharmaarke Maxamed Warsame.
Qaraxa ayaa ahaa mid loogu xiray gaarigii ay wateen.
Dhaawac agaasimaha Telefishinka ayaa loola cararay isbitaalka, waxaana goobta wax ka dhaceen la wareegay ciidamada amniga oo joojiyey dhaqdhaqaaqa halkaasi.
Agaasimaha geeriyooday Cabdicasiis Afrika, ayaa muddo dheer ka shaqaynayey warbaahinta dawladda, isagoo horayna uga soo shaqeeyey warbaahinnadii maxalliga ahaa ee Muqdisho, si gaar ahna waxaa loogu yaqaanay barnaamijkii gungaar ee maxkamadda ciidamada iyo xukunnada Alshabaab.
Sidoo kale agaasime Sharmaarke Maxamed Warsame ayaa isna muddo ku shaqaynayey mihnadda saxaafadda, waxaana uu hadda hayaa agaasinka Telefishinka Qaranka, horayna warbaahinnadii uu uga soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa Radio Daljir.